Sarkaal sare oo Shabaab kasoo baxsaday & ilaaladiisii oo Muqdisho laga dejiyey | Hadalsame Media
Home Wararka Sarkaal sare oo Shabaab kasoo baxsaday & ilaaladiisii oo Muqdisho laga dejiyey
Sarkaal sare oo Shabaab kasoo baxsaday & ilaaladiisii oo Muqdisho laga dejiyey
(Muqdisho) 24 Abriil 2019 – Saraakaal sare oo ka tirsanaa Al Shabaab ayay Dowladda Federaalka Soomaaliya ku guulaysatay in ay ka soo dejiso Magaalada Muqdisho kaas oo la sheegay in uu ka soo goystay kooxdii uu ka tirsanaa.
Aadan Cabdi Maxamed Aadan Coobbe ayaa diyaarad gaar ah loogu soo qaaday degmada Baardheere ee gobolka Gedo halkaaas oo uu ka dhacay wada hadalkii uu isku dhiibay.
Waxa la socday sarkaalkan nin kale oo ilaalo u ahaa, waxana uu Degmada Baardheere uu ku yimid gaari nooca Suzuki ah
Degmada Bu’aale oo ah meel ay ku xooggan yihiin Al Shabaab ayuu sarkaalkani ka yimid, halkaas oo uu xilal kala duwan ka soo qabtay, waxana markii dambe la wareegtey Hay’adda NISA.
Maamulka Gobolka Gedo ayaa sheegay in sarkaalkani uu mudo wada hadal uu kula jiray maamulka gobolka.
Previous articleDEG DEG: Madaxwaynaha Somalia & wefdi uu hoggaaminayo oo ka degey Casmara + Sawirro
Next articleSomaliland oo sii daysey haween Soomaali ah oo arrin la yaab leh darteed u xirnaa!